Uchwepheshe We-Semalt Uqinisekisiwe Okuthi Udinga Ukufunda Ngezikhwama Ze-Inthanethi Nokukhwabanisa - Nasi isizathu
Ukukhwabanisa ku-intanethi kubhekwa ngokuthi "ukukhwabanisa kwe-intanethi" noma "ukukhwabanisa". Lolu hlobo lokukhwabanisaivela emafomu amaningi, njenge-imeyili ogaxekile. Isijeziso sokusebenzisa noma sokwenza amakhodi e-mail angamaphutha kukhona iminyaka eyishumi kuya kwengamashumi amabili ejelee-United States. Abakhahlambalazi bavame ukuzenza njengabameleli izinhlangano zokusiza futhi bafune usizo lwakho kulabo abahlukunyezwayoizinhlekelele zemvelo, ukuhlaselwa kwamaphekula, izingxabano zesifunda noma izifo eziwumshayabhuqe. Uma ngabe uyisisulu se-scam e-intanethi, kubalulekile ukuthi uhambiseumbiko ku-Australian Cybercrime Online Reporting Network (ACORN) ngokushesha ngangokunokwenzeka. Imibiko eyenziwe kule nethiwekhi iya phambili emaphoyiseninoma izinhlaka zezobunhloli ukuze kwenziwe uphenyo.
uJason Adler, iMenenja Yokuphumelela Kwekhasimende i-Semalt ,igxile ezinhlotsheni zokukhwabanisa nge-intanethi ngenhloso yokusiza ukuzivikela ekuhlaselweni.
Izinhlobo ezivame kakhulu zokukhwabanisa kwe-intanethi yizinkohlakalo ze-inthanethi, ukukhwabanisa, ukwebiwa kwe-identity,kanye nokuthengwa kwendawo yokudayisa nokudayiswa.
ukukhwabanisa kwebhange le-intanethi
Kuchazwa ngokuthi ukusetshenziswa kwamandla okungenzeka angekho emthethweni ukuthola izimpahla, umuntu siquulwazi, impahla noma imali esikhungweni sangasese noma esikhwameni. Izinhlobo ezivame kakhulu zokukhwabanisa kwe-intanethi ye-intanethi yi-recruitment ye-mule futhiukuphinga. Abaqashi bavame ukusebenzisa ulwazi lwakho olubucayi njengephasiwedi noma igama lomsebenzisi ukufinyelela imininingwane yakho. Bangase bathole ulwazi olunjalo kusukaamaphilisi akho, amadivayisi eselula noma i-laptops ngokuthumela i-malware namagciwane.
Lezi zinsuku, abantu abaningi basebenzisa ama-mobiles abo kanye nama-smartphones ukufinyelela ebhange laboama-akhawunti. Izigebengu ziyazi ukuthi kungaba nzima ngabo ukuthola ulwazi lwakho. Ngakho-ke, bathumela ama-imeyili angalungile noma bacele ukuthi uchofoze ngokuqondileizixhumanisi, ukudalula ulwazi oluyimfihlo. Akufanele uphendule ema-imeyili angaziwa. Kubalulekile ukuthi ungachofozi kuzixhumanisi ezingaziwafuthi unganaki abantu abaqhubeka bekuthumela okunamathiselwe.
Ukuphanga, ngakolunye uhlangothi, umzamo wokuthola ulwazi olubucayi njengalokhuigama lomsebenzisi, iphasiwedi, i-PayPal ID kanye nemininingwane yekhadi lesikweletu, ngokuzifihla izinhlangano ezinokwethenjelwa ekukhulumisaneni kwe-elektroniki.
Izihlungi ezikhethekile zogaxekile zisiza ukunciphisa inani lama-imeyili e-phishing afinyelela kuweamabhokisi okungenayo. Ungakwazi futhi ukufaka i-antivirus noma isofthiwe yokulwa ne-malware ukuze ugcine imininingwane yakho igcinwe. I-AFP iphakamisa ukuthi awuphenduliimeyili ogaxekile futhi ususe ngokushesha ngangokunokwenzeka. Uma kukhona okunamathiselwe, akufanele uvule lezo zinamathiselo njengoba zingaqukathaizinhlelo ezingafuneki noma amagciwane.
Ukukhwabanisa kwendawo yokuthenga nokuthengiswa kwamadayimani
Abahlaseli bavame ukusebenzisa ubuchwepheshe bamuva ukusetha amawebhusayithi okuthengisa amafake avelaezifana nezitolo ezidumile ezithengisa ezitolo. Basebenzisa izakhiwo eziyinkimbinkimbi nemiklamo yokuheha abantu abaningi. Kubalulekile ukuthi awukwenzifaka imininingwane yakho, imininingwane yekhadi lesikweletu noma i-PayPal ID kumawebhusayithi anjalo. Zonke izingosi ezisendalini zine-intanethi zinemithetho nemigomo eqinile.Abakwa-Scammers abakwazi ukukuhlasela ngokusebenzisa lawa mawebhusayithi, futhi bayazi ukuthi bangabhekana kanjani nabantu abangaphandle kwamasayithi. Ungaxhumana noIKhomishini yase-Australia Yokuncintisana Nokuthengisa ukunciphisa izingozi zokukhwabanisa kwe-intanethi. Uma usebenzisa amawebhusayithi e-auction njenge-eBay, azokwenzahhayi ukukubuza lutho mayelana nekhadi lakho lesikweletu noma i-PayPal.
Uma ngabe uthola ama-imeyili asolisayo, indlela engcono kakhulu futhi elula ukususakubo ngokushesha ngangokunokwenzeka. Kubalulekile ukuthi ungachofozi okunamathiselwe okuthunyelwe kulawo ma-imeyili.